Shirkii Kooxda xiriirka Caalamiga ah oo laga soo saaray Warmurtiyeed Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shirkii Kooxda xiriirka Caalamiga ah oo laga soo saaray Warmurtiyeed Moqdisho 04,July, 2012
. Shirka 22 -aad ee Kooxda Xiriirka Caalamiga (ICG) ayaa lagu qabtay Rome 2da ilaa iyo 3da Luulyo 2012 iyadoo uu guddoominayay wakiilka gaarka ah ee xoghaya qaramada midoobay Dr. Augustine Mahiga iyo wadamada Norway iyo Mareykanka.
Kooxda xiriirka caalamiga ayaa dib-u fiirin ku sameysay horumarada siyaasadeed waxayna ku cel celisay sida ay uga goantahay xiliga ku meel gaarka inuu dhamaado 20ka bisha siddeedaad 2012 sida ku xusan Axdiga ku meel gaarka, heshiiskii Jabuuti, heshiiskii Kampala, Roadmap-ka iyo shirarkii wadatashiyada ahaa ee xigay. Gaar ahaan, Kooxda ICG ayaa soo dhoweysay heshiiska ay wada gaareen madaxda dowladda mar ay shir isagu imaadeen magaalada Nairobi 22 June isla markaana isku af gartay qabyo qoraalka kama dambeysta ah. Qabyo qoraalka ayaa la hor keenayaa Golaha Dastuurka Qaranka si ay u saxiixaan si ku meel gaar ahaan.
Midda ku saabsan baarlamaana federaaliga ah ee cusub, kooxda waxay sheegeen in loo baahan yahay in baarlamaanka cusub uu ahaado mid ka shaqeeyo rabitaanka shacabka gaar ahaan tayada xubnaha baarlamaanka, dheeli tirnaan xagga jinsiyada iyo awooda fulinta goaanada dowladda.
Kooxda ayaa ku cel celisay taageerada ay u hayaan ehelada dadka ku geeriyooday dagaalada. Iyagoo aqoonsaday in AMISOM ay ku guuleysatay ilaalinta rayidka hadana ugu yeertay kooxaha isku haya Soomaaliya inay ilaaliyaan shaacabka gaar ahaan haweenka iyo caruurta. Waxay baaq u direen heyadaha gargaarka in gargaarka ay gaarsiyaan kuwa u baahan.
Shirka labaad ee lagu qabtay Istanbul ayaa soo shaac bixiyay muhimadda dib- u heshiisiinta, heyado u sameynta dowladda iyo dib- u dhiska laamaha dowladda. Gaar ahaan shirka Istanbul wuxuu xoogga saaray baahida loo qabo in dhaqaale lagu dayactiro wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda, fududeynta waxyaabaha aasaaska u ah nolosha. Shirka saddexaad ee lagu qabtay Dubai ayaa isna waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo ku aadan ka hor tagga burcad badeeda.
African Union, Belgium, Burundi, Canada, China, Denmark, Djibouti, East African Community, Egypt, Ethiopia, European Union, Finland, France, Germany, Intergovernmental Authority on Development, International Development Law Organisation, Islamic Development Bank, Italy, Japan, Kenya, Korea (Republic), League of Arab States, Netherlands, North Atlantic Treaty Organisation, Norway, Organisation of Islamic Cooperation, Qatar, Saudi Arabia, Somalia (TFG, TFP, Puntland, Galmudug, Ahlu Sunna Wal Jamaa), South Arica, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkey, Uganda,